Yuusuf Garaad: Hague fari kama Qodna - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Yuusuf Garaad: Hague fari kama Qodna
Si ay u sii socoto taageeradaas muhiimka ahi, waxaa ila habboon in laga fogaado qofeynta kiiska. In laga dhowrsado far-ku-fiiqa siyaayiin ay ka mid yihiin Madaxda dalka hadda ugu sarreysa iyo qaar hore u ahaa Madax Sare. Siyaasiyiintaas waxaa eedeynta loo jeedinayo loo cuskanayaa oo keliya fasiraadda Qareennada Kenya. Ma habboona in aan qaadanno fasiraaddaas marka aan maqleyno fasiraad taas ku lid ah oo ay jeediyeen Qareennada Soomaaliya.
Aan is xusuusinno in xaqeennu weli naga maqan yahay oo aan laga miradhalin dacwadda. Aan is xusuusinno in xataa weli aan lagu guuleysan in kiiska la furo. Ma joogno xilli lagu mashquulo is-eedeyn iyo is-difaac Soomaalida dhexdeeda ah.
Posted by Yusuf Garaad
Banaadir December 4, 2021
Taliyaha Ciidanka Lugta Gen. Maxamed Tahliil Biixi ayaa ka hadlay ciidamada milateriga ee uu xukumo iyo dhibaatoyinka ay ku hayaan shacabka Muqdisho, kadib markii...
Puntland December 4, 2021
Wararka laga helayo magaalada Boosaaso ayaa sheegaya inay xaaladda magaaladaasi sii adkaaneyso, kadib amar amni oo xalay ka dhaqan galay. Ciidamada amniga Puntland ayaa joojiyey...
Taliska Ciidamada Booliska ayaa fahfaahin ka bixiyey kiisas dil ah oo ay geysteen ciidamo ka tirsan milateriga Soomaaliya oo xalay iyo caawa ka dhacay...
Waxaa Goor dhoweyd geeriyooday Mahad C/raxmaan Maxamuud oo ay caawa rasaas ku fureen askar ka tirsan ciidamada dowladda xilli uu ku usgnaa Isgoyska Soobe...
Askar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa habeenkii labaad rasaas ku furay dad shacab ah, iyagoo dhaawacay qof la socday Mooto Bajaaj. Shilkan ayaa ka dhacay...
Taliska Ciidamada Booliska ayaa ka hadlay dilka wiil iyo gabar walaallo ahaa oo xalay lagu dilay Isgoyska Dabka ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidamada Booliska Cabdifitaax...
Qoyska walaallo lagu dilay Muqdisho oo Go’aan ka qaatay Aaskooda iyo Dalab ay direen..
Ehelada iyo Qoyska laba walaallo ahaa oo xalay lagu dilay magaalada Muqdisho ayaa dalbaday cadaalad, waxayna go'aansadeen inaan la aasin labada marxuum ee ku...